သကြားလုံး Crush ဂျယ်လီ Saga - Candy Crush ဂိမ်း - အခမဲ့ဘဝပုံစံများသိကောင်းစရာများအရိပ်အမြွက်
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် / အမျိုးအစား / သကြားလုံး Crush ဂျယ်လီ Saga
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ဇူလိုင်လ 11, 2021 အားဖြင့် Isobella ဖရန့် Comment တစ်ခု ချန်ထားခဲ့ပါ။
ဒီနေ့ hectic ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ငါတို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မှအချိန်လေးကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်ပါတယ်, ဘဝကိုထိုက်တန်စေသည့်အချိန်လေးများ, ကျွန်ုပ်တို့ဘ ၀ ဟုခေါ်ဝေါ်သောဤအလုပ်များမှုန်ဝါးမှု၌ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ်ကျေနပ်စေသည့်အချိန်လေးများ. ဒါ့အပြင်, မင်းအတွက် အလွယ်ဆုံး လွတ်မြောက်မှုနဲ့အတူ ငါတို့ လာရမှာ Candy Crush Jelly ဇာတ်လမ်း.
သကြားလုံး Crush ဂျယ်လီ Saga ပေါင်းစည်းခြင်းဖြင့် အမှတ်များရယူသည့် အွန်လိုင်းဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။3သို့မဟုတ် တူညီသောဂျယ်လီများ. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ထက်ပိုယူလာလျှင်3ဂျယ်လီများ အတူတူ, အလျားလိုက်ကဲ့သို့ မည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆို, ဒေါင်လိုက်, L, ဒါမှမဟုတ် T, ထို့နောက် သင်သည် အထူးဂျယ်လီအချို့ကို သော့ဖွင့်ရန် အခွင့်အရေးရရှိမည်ဖြစ်သည်။, ထုပ်ပိုးထားသော ဂျယ်လီနှင့် အစင်းကျောက်ကျောကဲ့သို့. ဒီဂျယ်လီတွေက အရမ်းမိုက်တယ်။: သင်သူတို့နှင့် သင်ပြုလုပ်သောရွေ့လျားမှုပေါ်မူတည်၍ အတန်း သို့မဟုတ် ကော်လံတစ်ခုလုံးကို ထုတ်ယူသည်။. တစ်နည်းအားဖြင့်, သာမာန်သကြားလုံးများကို ကရုဏာဖြင့် ရရှိနိုင်သော အခြားသော အထူးသကြားလုံးများလည်း ရှိပါသည်။. အတိအကျ, မင်းခရီးလမ်းမှာ ဒီဂျယ်လီတွေကို သော့ဖွင့်တော့မယ်။ Candy Crush Jelly ဇာတ်လမ်း.
ယခု, သကြားလုံးကြိတ်ဂျယ်လီ saga သည်ခရီးတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသင်နားလည်ရန်လိုအပ်သည်။. နောက်ပိုင်းတွင်, အသုံးပြုသူများသည် နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။, စီစဉ်ခြင်း။, တွေး, ပြီးတော့ ဒီခရီးရှည်ကြီးမှာ ပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာတွေလည်း ပါပါတယ်။. အကြောင်းတွေရှိတယ်။ 3665 အဆင့်များ 163 ဇာတ်လမ်းတွဲများ. ဇာတ်လမ်းတွဲတိုင်းပြီးရင်, သင်သည် အဆင့်တစ်ခုနှင့် ခရီးဘုတ်တွင် ပြောင်းလဲသည်။, you change your destination. In the first 63 အပိုင်းတွေရှိတယ်။ 20 အဆင့်များ, ခက်ပုံရတယ်ဗျ။? ကောင်းပြီ, သင် groove ထဲရောက်သွားတဲ့အခါ သင်မသိဘဲနဲ့ ဒီအဆင့်တွေကို အလွယ်တကူဖြတ်ကျော်နိုင်ပါတယ်။. အကျိုးဆက်, ကျန်၌ 102 ဇာတ်လမ်းတွဲများ, ရှိပါတယ် 15 အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် အဆင့်များ.
တကယ်ပါပဲ, အန္တိမရည်မှန်းချက် Candy crush Jelly sage is not only your fun. အပြင်, it is to defeat the Evil Queen. ဒါ့အပြင်, if you want to win against her, you have to cross all the levels and episodes. There isaspecial mode called head-to-head’ in the သကြားလုံး Crush ဂျယ်လီ Saga where you can compete with the evil queen directly!
No doubt, Candy Crush game seems simple, but the person whoever connects the most jellies, you or the queen, wins vital. ဒါပေမယ့်, you need not to forget that our opponent is the evil queen and she is very good at connecting the jellies.
လူကြိုက်များသော အပိုင်းအမည်အချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။:
Celestial Choco ခွက်များ
Soft serve ထိပ်သီး
ယခု, ဒီမတူညီတဲ့ အဆင့်တွေကြားက ကွာခြားချက်က ဘာလဲဆိုတာ သင်တွေးနေလိမ့်မယ်။? ကောင်းပြီ, အဖြေသည် အဆင့်တစ်ခုစီအတွက် ရှိနေသော ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးအစားကို ရိုးရှင်းပါသည်။. ထို့ကြောင့်, အဆင့်တစ်ခုစီ၏ ကန့်သတ်ချက်များသည်လည်း ပြောင်းလဲသွားသည်။. ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် တူညီသော ရည်မှန်းချက်များနှင့် အတားအဆီးများကို ငြီးငွေ့မည်မဟုတ်ပေ။, အဆင့်တစ်ခုစီသည် စဉ်းစားစရာအသစ်တစ်ခုကို ဆိုလိုသည်။, ပြီးမြောက်ရန် အသစ်တစ်ခု. ထို့ကြောင့်, သင် အပန်းဖြေရုံသာမက သင့်ဦးနှောက်ကိုလည်း တစ်ချိန်တည်း လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ။.
ရည်ရွယ်ချက်များသည် အထူးသကြားလုံးများကို ပေါင်းစပ်ပြုလုပ်ရန် အချက်နှစ်ချက်ကို ရယူရုံဖြင့် ရိုးရှင်းနိုင်ပါသည်။. ၎င်းတို့သည် ဇာတ်လမ်းတွဲနှင့် သင်တက်နေသည့် အဆင့်အပေါ်တွင် မူတည်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။. သို့သျောလညျး, ကန့်သတ်ချက်များသည် နာရီကိုနှိပ်ခြင်းအထိ ပေးသောရွေ့လျားမှုအရေအတွက်နှင့် ကွဲပြားသောကြောင့် စီစဉ်ထားသောရွှေ့ရန် လိုအပ်ပါသည်။.